Tinye ebe ihe oyiyi na Foto maka Mac | Esi m mac
Site na ozi dị ukwuu anyị nwere na Macs anyị, ọ dị mkpa ịnwe ozi ahụ ahazi ka enwere ike. Mpempe akwụkwọ, aha, enweghị nhọrọ ma ọ bụ karịa karịa nke ọzọ, ọ dabere na mmasị ma ọ bụ mmasị anyị.
Mana ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka foto, nke a nwere ike idepụta ma nye ya iwu site na ụdị agwa dị iche iche. Otu n'ime njirimara bụ isi bụ ọnọdụEzigbo maka ịchọta foto nke otu ụbọchị ma ọ bụ otu ọnọdụ. Maka nke a na Mac anyị nwere ngwa Foto. Otú ọ dị, anyị ga-eburu n'uche na foto nke ekwentị anyị ga-ebu ọnọdụ ahụ, ọ bụrụ na anyị nwere nhọrọ arụ ọrụ, mana nke igwefoto ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị.
Ya mere, anyị ga-ahụ otu esi achọta onyogho ndị a ma tinye ebe kacha dị nso. Maka nke a, anyị kwesịrị ịnwe foto anyị na Foto ngwa na-eji nke smart albums. Ọ bụrụ na ịnweghị onyonyo gị na ngwa ahụ, ịbubata ha dị mfe dịka ịdọrọ ha na akara ngosi ngwa foto.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ imeghe ngwa Photos. Mgbe ahụ, anyị na-aga faịlụ menu na anya n'ihi na nhọrọ «New Smart Album» ma ọ bụ ọzọ anyị na-eji ya keyboard shortcut nke bụ Alt + Cmd + N
The smart album menu ga-emeghe. Nke mbu, anyi aghaghi itinye a kpọọ album ahụ. Ọ bụrụ na anyị hapụ ya na ndabara ma anyị nwere karịa otu ọba egwu, ọ ga-esiri anyị ike ịchọta nke anyị na-achọ. Oge na-esote oge maka nzacha: na mpaghara mbụ na aka ekpe, anyị ga-egosi na anyị ga-emere ndị nzacha ahụ Foto. Mgbe ahụ ọnọdụ ahụ na-egosi, na "bụ / bụ" ma ọ bụ "ọ bụghị / ọ bụghị." Na nke anyị, anyị ga-asị: "Abụghị / ọ bụghị" n'ikpeazụ anyị ga-egosi, "Akpado ya na GPS."
Ugbu a, anyị ga-agarịrị na foto Foto ndị bụ isi, ebe a na-achọta albums niile. Anyị na-achọpụta nke anyị ma nweta ya, n'ọnọdụ m enwere foto 655 na-enweghị mkpado GPS.
Iji tinye ha aha n'ụzọ ziri ezi, anyị ga-ahọrọ foto niile na-eketa otu ebe ma pịa: Cmd + i. A menu meghere ebe anyị hụrụ ubi ọnọdụ. Anyị ga-egosi ebe esere foto. Ọ bụrụ na Apple nwere ozi gbasara ebe a, ọ ga-atụ aro nhọrọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, tinye ọtụtụ ozi dị ka o kwere mee.
Ozugbo emere nke a, foto ga-apụ n'anya folda "enweghị ọnọdụ" dịka ha nwere ya.
Ugbu a atingchọta ha si ngwa si search engine ma ọ bụ na-enyemaka nke Siri ga-nnọọ mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Tinye ebe foto na Foto maka Mac
Edemede oke uru. Amaghị m na enwere ike ịbudata foto n'ime ngwa Foto! Daalụ nke ukwuu!
Apple ga-emegharị MacBook Pros ọhụrụ na afọ a na-agbakwunye 32GB RAM na ndị ọhụrụ na-arụ ọrụ Kaby Lake